Uthotho luka-Arkady Renko, umcuphi waseRussia uMartin Cruz Smith | Uncwadi lwangoku
Uthotho luka-Arkady Renko, umcuphi waseRussia uMartin Cruz Smith
UArkady renko ngumcuphi isiRashiya umlinganiswa ophambili kuthotho lweenoveli ezibhalwe ngumbhali waseNyakatho Melika UMartin Cruz Smith. Kuqala kwavela Ipaki yeGorky, ngo-1981, kwaza kwakho nezinye Izihloko ezingama-7 ngaphezulu eziphumelele kakhulu ngabagxeki kunye noluntu, ukongeza ekufumaneni amabhaso aliqela ohlobo olumnyama, njengoEdgar okanye uHammett. Kule mihla yokuvalelwa ndiphinde ndafunda ezinye. Ke apho olu hlaziyo luya. Kulabo abangayaziyo okanye abayihlaziyayo kwabo bayaziyo.
1 UArkady renko
2 Uthotho lwe-Arkady Renko
2.1 Ipaki yeGorky
2.2 Inkwenkwezi yePolar
2.3 Isikwere esiBomvu
2.4 IHavana Bay
2.5 Ixesha leWolf
2.6 Isiporho sikaStalin
2.7 Amaxesha amathathu onyaka
Into yokuqala eyanditsalela kuArkady Renko yayikukuzoba yexeshanye kunye nostalgic Uhlobo lwabo, oluqhelekileyo kwinto abaqhele ukuyibiza ngokuba yi "Umphefumlo waseRashiya". Kwaye kuyahlekisa, ukudala indalo yombhali waseMelika kunye nookhokho baseSpain njengoMartin Cruz Smith. Kwakhona, xa sidibene naye Ipaki yeGorky, Kwaye ngenxa yoko kwenzekileyo nabazali bakhe, siyayiqonda loo nto utyekelo lokugxeka nokuzitshabalalisa. Kodwa kunjalo kakhulu bulumko, ukuthandabuza Ukujongana nethemba eliqinisekileyo ngekamva, ngakumbi kuye, kwaye kwangaxeshanye, akanakunceda ukuba ube nongcinga, ongenakonakala, efanelekileyo y uzukisiwe. Uyibonisa ngalo lonke ixesha ewela eluthandweni, nangona enokwazi ukuba luthini iindleko zakhe.
Amatyala akho kulo lonke uthotho aya kukuthatha kwamanye iimekoukusukela United States ukuya eCuba, nakwezinye iindawo ezifana IChernobyl. Iminyaka nayo iya kuhamba kuye, nokususela kuyo Isiphelo 80 siza kufika ngo xesha Faka phakathi, apho ibali lakhe lokugqibela lenzeka khona, Tatiana.
Uthotho lwe UArkady renko
La inoveli yokuqala mhlawumbi i eyaziwa kakhulu. Ishicilelwe ngo-1981, apho Arkady Renko uphando ukubonakala kwezidumbu ezintathu ifumaneka kwiGorky Park yaseMoscow. Ubuso babo kunye neencam zeminwe azikho, kuthintela ukubonwa. URenko uya kufumanisa ukuba ityala linjalo iimpembelelo zamanye amazwe. Kodwa zombini KGB, la elite ISoviet kunye Usomashishini onganyanisekanga waseMelika bafuna ukususa uRenko kuphando. Ekuphela kwento abayifumanayo kukuba unyanzelisa ukuyisombulula ngaphandle kweziphumo zomntu. Kwaye phakathi kwayo yonke loo nto Ibasemathandweni ukusuka kumfazi akazi ukuba angathemba na.
Isihloko sithi igama le nqanawa yomzi-mveliso othungelwano lwayo luvela umzimba wentombazana eyeyakho abasebenzi. Y U-Arkady Renko usebenza kuyo, kuxeshaphi umphandi ngaphambilinanjengoko waye wasuswa esikhundleni "ngezizathu zezopolitiko" emva kwetyala laseGorky Park. Kwaye nangona ijongeka njenge suicidio, umphathi wenqanawa ucela ukuba uphande.
Cwangcisa emva ukuwa kobukomanisi, kule inoveli u-Arkady Renko kuya kufuneka aphande nge Ukusweleka kwebhanki edityaniswe nelabafileyo. Kwaye uya kudibana kwakhona Irina Asanova, umfazi ayithandayo kwaye badibana kwi Ipaki yeGorky Kwaye yayisisizathu sokuwa kwakhe kubabalo ngaphakathi kwenkqubo.
Ngeli xesha uRenko kuya kufuneka aye eHavana ukuya Chonga isidumbu somntu waseRashiya ebonakele apho. URenko uza kufumanisa isixeko angazange asicinge kwaye simphazamise. Kuya kufuneka wenze njalo sebenza namapolisa amahle aseCuba, kwaye baya kubonwa kunye namasiko eSanteria, waseMelika imbacu kunye neqela le Imikhosi. Kodwa uya kuthatha ixesha elincinci ukonwabela into ebomini bakho.
El ukuzibulala likaPasha Ivanov, ongomnye woosozigidigidi abatsha baseRashiya, yimeko ekuya kufuneka isonjululwe nguArkady Renko kwaye mhlawumbi uya kuba eyona inzima ukude kubengoku. Ityala eliza kukukhokelela IChernobyl, imeko-bume eya kwenza ukuba uphando lube nokuqina ngakumbi.
Iphinde yasetwa eMoscow, isixelela ngento emangalisayo eyenzeka xa abakhweli abangaphantsi kaloliwe abaninzi bathi babone isiporho sikaStalin kwesinye sezitishi zayo. Oko kubonakala kungabalulekanga kujika kube kubi ngakumbi xa uRenko efumanisa oko abacuphi ababini abadumileyo ingayi ubandakanyekile. Ezo zinto zimelwe ukubonakala zinxibelelene ne iqela lezopolitiko Omnye wabacuphi ngumlwi. Kwaye elo qela lifihla idatha ebalulekileyo malunga noko kwenzekileyo Chechnya kwi 90. Kodwa Renko nayo iya kufumanisa ezinye iimfihlo ukuthandana umva kwi Imfazwe yesibini yeHlabathi.
Amaxesha amathathu onyaka
Nge qeqesha imvelaphi, a Umama okwishumi elivisayo kwaye ndedwa kwaye a ijoni ngeenjongo ezimbi kuye, kule noveli uRenko kuya kufuneka enze uphando nge ukunyamalala komntwana apho kungekho mkhondo.
Isihloko esipapashiweyo sokugqibela sixelela ukuqondana phakathi kokufakwakule veki inye, wentatheli engenankathalo, Tatyana Petrova, kunye ne-billionaire mobster. U-Arkady uya kugcina umkhondo wazo zombini ezi ziganeko kwi UKaliningrad, "Idolophu eyimfihlo" yemfazwe ebandayo. Kwaye ngokuphanda ixesha elidlulileyo likaTatiana, u-Arkady uya kuzifumana bantwana ishiyiwe kunye nencwadana yetoliki naye ofileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Uthotho luka-Arkady Renko, umcuphi waseRussia uMartin Cruz Smith
Inyaniso malunga necala likaHarry Quebert